I-WhatsApp ikuvumela ukuba wenze iifowuni zeqela ngokuchofoza okukodwa | I-Androidsis
I-WhatsApp ikuvumela ukuba wenze iifowuni zeqela ngonqakrazo olunye kunye nomsebenzi walo omtsha
I-WhatsApp isebenza kuphuculo oluninzi namhlanje, uninzi lwabo luza kufika kulo nyaka njenge- ukuthumela okuninzi kweefayile yeaudiyo. Kodwa kwabanye akuyi kufuneka silinde ngaphezulu. Le yimeko yencoko yamaqela, ngoku ejonga indlela ephuculweyo ngayo umnxeba kuwo. Amaqela sele eyindawo eqhelekileyo kwi-app.
Kwakhona, bekukudala ngoko kunokwenzeka ukuba wenze iifowuni zeqela kuWhatsApp. Ukusetyenziswa kwemiyalezo ngoku kuququzelela le nkqubo enkosi ngomsebenzi wayo omtsha. Ngale ndlela, sele kunokwenzeka yenza umnxeba weqela ngonqakrazo olunye. Ukukhululeka ngakumbi kubasebenzisi ngawo onke amaxesha.
Eli nqaku litsha iqala ukwaziswa ngohlobo 2.19.17 lweWhatsApp. Inguqulelo esele isungulwe ngokusesikweni. Sele igqithile iveki i-beta yayo yasungulwa. Kodwa ngoku ingxelo esemthethweni iyeza. Ke bonke abo babasebenzisi babhaliswe njengabavavanyi be-beta ngokuqinisekileyo sele bekwazile ukuvavanya eli nqaku litsha kwisicelo semiyalezo ngaphandle kweengxaki ezininzi, kwiintsuku zamva nje.
Olu lutshintsho olunobulumko, ukusukela ngoku, kwiincoko zeqela ubona i icon entsha phezulu kwiscreen. I icon emile yefowuni, kunye nesimboli yokudibanisa. Kodwa iya kuvumela ukusetyenziswa ngokukhululekileyo ngakumbi nangoko ngokukhawuleza kweefowuni zeqela kwisicelo. Le yayiyinto abasebenzisi abaninzi ebebeyilindele ixesha elide. Ngethamsanqa, ngoku ngokusemthethweni kuWhatsApp kwihlabathi liphela.
Inqaku elitsha kwiWhatsApp
Kwenzeka ntoni ngoku kwisicelo kukuba sineli qhosha ukuba vumela ukufowuna okanye ukufowuna ividiyo kwiqela, Olunye uphawu lwakutsha nje kwi-app. Ke ukuba sifuna ukwenza umnxeba nabantu abaliqela okanye nabo bonke abo bakwelo qela, kuya kuba lula kakhulu. Sitsho ezininzi okanye zonke, kuba i-WhatsApp iya kukunika ukhetho malunga noku.
Ngaphakathi kwincoko yeqela, Kuya kufuneka ucofe i icon ebonakala phezulu Ekunene kwesikrini, esimile njengefowuni. Ngokwenza oku, itreyi yesilayidi iya kuvela ezantsi kwesikrini. Kuyo sibona onke amalungu eqela lencoko. Apha siya kuba nakho ukukhetha ukuba ngubani ofuna ukumbiza ngelo xesha.
Ke sinokukhetha bonke abantu kule ngxoxo kuWhatsApp. Kodwa ukuba ufuna ukuthetha kuphela nesibini sabo bantu, kuya kufuneka ukhethe. Ukwenza oku, kuya kufuneka ucinezele malunga nalo mntu okanye umfanekiso wakhe kwi-app. Emva koko, uya kuba nakho ukukhetha ukuba into oyifunayo kukufowuna okanye ubize ividiyo, kuba uya kubona ukuba ii icon zombini ziyavela. Ngale ndlela, sele yenziwe.
Olu lutshintsho olukhulu kwisicelo yekhuriya. Kungenxa yokuba kude kube ngoku, ukuba ufuna ukubanomnxeba nabantu abaliqela ku-WhatsApp, inkqubo yayihamba kancinci kwaye ingonwabisi. Kuba kufuneka uqale unxibelelwano phakathi kwabantu ababini kuqala. Xa oku sele kwenzekile, emva koko kunokwenzeka ukuba omnye umntu ajoyine incoko, ngeli xesha ngohlobo lomnxeba. Ke ngoku kuya kuba lula kakhulu kubasebenzisi kwi-app.
Lo msebenzi mtsha sele ungenisiwe kwifayile ye- Inguqulelo ye-WhatsApp 2.19.17, njengokuba besesitshilo ekuqaleni. I-beta yasungulwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa kwezi yure iqala ukwazisa ngendlela ezinzileyo. Kungenzeka, ungasisebenzisa. Kodwa ukuba akunjalo, uhlaziyo lunokuza kuwe kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Nangona ungakhangela kuGoogle Play ukuba sele unalo uhlaziyo losetyenziso olukhoyo ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-WhatsApp ikuvumela ukuba wenze iifowuni zeqela ngonqakrazo olunye kunye nomsebenzi walo omtsha
Iinkcukacha zebhetri entsha ye-Samsung Galaxy S10 ayivelwanga
Yiya kuphononongo lwendawo kwimithombo yam yomhlaba kwi-Idle Planet Miner